MP4 Tag Editor: Easily Dezie MP4 Metadata maka Windows / Mac
> Resource> Video> Olee dezie MP4 Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú dezie MP4 Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ ihe ọmụma nke a faịlụ, ị nwere ike nri pịa ya, họrọ onwunwe, họrọ nkọwa. Otú ọ dị, ihe ọmụma e nwere-apụghị dezie. Ka ihe atụ, i nwere ike chọrọ dezie metadata n'ihi na gị MP4 nkiri, dị ka eme ihe nkiri, nduzi, mkpado, ma ọ bụ nkọwa. Olee otú dezie MP4 metadata? Luckily anyị na hụrụ ihe elu MP4 mkpado nchịkọta akụkọ maka gị.
Wondershare Video Converter Ultimate (Video Converter Ultimate for Mac) Bụ ihe kasị mma MP4 metadata nchịkọta akụkọ. Ị nwere ike iji ya mfe dezie metadata maka MP4. Nke a MP4 metadata nchịkọta akụkọ Filiks videos na a 30X ngwa ngwa ọsọ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Na nke a, ị na-ele elu àgwà vidiyo na Apple ngwaọrụ ozugbo. Wezụga ya, ọ bụ ihe nile-na-otu video Ntụgharị. Ọ nwere ike tọghata videos, download videos na ọkụ DVD. Ị nwere ike tọghata videos ọ bụla na usoro iji iOS ngwaọrụ, Android ngwaọrụ, na wdg Dị nnọọ ibudata ya ka a na-agbalị.
Olee otú dezie MP4 Metadata
Ka ịkpado MP4 fim, dị na-agụ nzọụkwụ n'okpuru. Wondershare Video Converter Ultimate Nwere a mara mma e mere interface, ọ na-ewe gị mgbalị ọ bụla ịmụta ya.
1 bulite faịlụ a MP4 mkpado nchịkọta akụkọ
Ị nwere ike mfe Dọrọ na dobe MP4 faịlụ ka a ngwa. Ma ọ bụ i nwere ike pịa "Tinye faịlụ" na n'etiti interface mbubata ị faịlụ. Ebe ọ bụ na a software akwado ogbe akakabarede na e nweghị max file size mmachi, ị nwere ike mbubata ọtụtụ ndị ọzọ videos na ya.
2 Set iOS ngwaọrụ dị ka mmepụta format
Biko pịa na ala akụ button n'okpuru "mmepụta Format". Họrọ "Ngwaọrụ" → họrọ "Apple" → họrọ apple ngwaọrụ, dị ka iPhone, iPad dị ka mmepụta usoro. Ọzọkwa ị nwere ike họrọ "Format" ma họrọ M4V dị ka gị mmepụta usoro.
3 hazie MP4 videos (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị MP4 nkiri zuru okè, ị nwere ike dị nnọọ pịa "Dezie" na dị video ka gbapụta ndị video edezi window. Nke a MP4 mkpado nchịkọta akụkọ na-ahapụ gị hazie vidiyo site trimming, n'ịgbanwe, na-agbakwunye mmetụta, watermark na sobtaitel. Dị nnọọ pịa akara ngosi n'elu nri nke video edezi window. Mgbe edezi, biko pịa "OK" iji zọpụta ya.
4 Dezie MP4 metadata
Pịa a icon na dị video ka gbapụta ndị metadata edezi windows. Họrọ gị video ụdị, Pịnye gị video aha, họrọ họọrọ asụsụ, wee pịa "Chọọnụ" ịgbakwunye metadata gị video.
Ọ bụrụ na gị dị MP4 faịlụ bụ a fim ma ọ bụ TV show, a MP4 metadata nchịkọta akụkọ ga-ele anya maka metadata ozi maka gị videos-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike dị nnọọ ịkpado gị MP4 faịlụ dị nnọọ site onwe gị. Ọzọkwa MP4 metadata nwere ike dezie. I nwere ike dị pịnye ọ bụla ị chọrọ na kwekọrọ ekwekọ igbe.
5 Play MP4 video on iOS ngwaọrụ
Mgbe metadata edezi usoro, biko dị nnọọ pịa "tọghata". Gị converted video ga-synced ka iTunes-akpaghị aka. Mgbe nke a, ị ga-ahụ videos na-ọma haziri. Na-egwuri egwu videos na gị iOS ngwaọrụ ga-nnọọ mfe.
Olee otú Tinye, Dezie WMV Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
iFlicks Alternative maka Windows: Tinye metadata, mma hazie iTunes
Olee otú Tinye Metadata na faịlụ MP3
Olee otú m nwere ike ịgbanwe My Video Standards si PAL ka NTSC
Olee otú Tinye MKV Metadata maka Windows / Mac (Yosemite gụnyere)
Top 20 Ịzụ ụmụ Video Sites Ịmụta nkà nke ịzụ ụmụ
Gịnị mere My MPEG Streamclip-adịghị arụ ọrụ?
Olee otú Download na tọghata Hulu Video ka MP3
Best Video Downloader: Download Videos si na saịtị ọ bụla na a Click